Grab Launches GrabAds, Myanmar’s First Digital Display Advertising Service in Grab Taxi | Myanmar Business Today
HomeBusinessGrab Launches GrabAds, Myanmar’s First Digital Display Advertising Service in Grab Taxi
In collaboration with MCI,alocal advertising technology company, Grab Myanmar,aleading high-tech ride-hailing service in Southeast Asia and Myanmar has announced the launch of GrabAds,adigital display advertising service, which enables private companies and corporations to place advertisements on Grab Taxis. The service will launch in November.
The advertisement service will show product information and product launching events of the clients in real-time on the tablets installed on the Grab Taxis to riders during the ride. The service also transforms the taxi intoamobile store where customers can test use and purchase new products while clients can display their brand logos inside the car and their advertisement on the tablets.
Through the ad campaign, passengers riding Grab Taxi will be able to learn more about the high-quality brands and products as well as their special promotion programs.
Grab, employing its information sources, domestic market studies, and strong Online-to-Offline (O2O) standing, will innovatively connect products to consumers allowing clients to easily analyze the target customer category for its products.
“The service will truly benefit the products thanks to high-tech advertising services such as Campaign Management Tools, which allow clients to manage the campaign in real-time while reaching the target effectively for the campaign,” said Ko Kaung Myat Hlaing, Commercial Director of MCI.
For detailed information on the Digital display advertisement service, clients can make inquiries at corpsales.mm@grabtaxi.com of Grab Myanmar and visit https://www.grab.com/mm/business/ads/.
Grab is one of the most popular leading Online-to-Offline (O2O) platforms in Southeast Asia providing essential daily services to users including an e-wallet that allows users to pay for transport, food, and direct-to-home purchases. Believing that citizens of Southeast Asia are entitled to enjoy the benefit from the digital economy, Grab is trying to provide services for transportation, food and delivery, andamobile payment system. Grab provides services in Singapore, Indonesia, Philippines, Malaysia, Thailand, Vietnam, Myanmar, and Cambodia. For detailed information, visit http://www.grab.com.
MCL,anational-owned advertising group, isacreation, management, and online/offline media company offering innovative technology advertisement campaign services. For more information, please visit http://www.mci.com.mm.
အရှေ့တောင်အာရှနှင့် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ထိပ်တန်း အဆင့်မြင့်နည်းပညာသုံး အငှားယာဥ်ဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းဖြစ်သည့် Grab Myanmar သည် ပြည်တွင်းနည်းပညာသုံး ကြော်ငြာ ကုမ္ပဏီလုပ်ငန်းစု တစ်ခုဖြစ်သည့် MCI ကုမ္ပဏီနှင့် ပူးပေါင်းကာ GrabAds ပလက်ဖောင်းပေါ်တွင် နည်းပညာသုံး ကြော်ငြာဝန်ဆောင်မှု အသစ်တစ်ခုကို ပုဂ္ဂလိက လုပ်ငန်းအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ကော်ပိုရေးရှင်းများအတွက် ကြော်ငြာထည့်သွင်းနိုင်ရန် ယခု နိုဝင်ဘာလက စပြီး စတင်ဝန်ဆောင်မှုပေးသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ယခု မိတ်ဆက်သည့် ကြော်ငြာနည်းအသစ်မှာ Grab Taxi များအတွင်း တပ်ဆင်ပေးထားသည့် ဒစ်ဂျစ်တယ်တက်ဘလက်များကတစ်ဆင့် အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီ ထုတ်ပြန်ထားသည့် သတင်းအချက်အလက်များနှင့် ပစ္စည်းထုတ်ကုန်မိတ်ဆက်အစီအစဉ်များကို Grab အသုံးပြုသူ ခရီးသည်များအား ၎င်းတို့၏ ခရီးလမ်းတစ်လျှောက် ပြသပေးသည့်ဝန်ဆောင်မှုဖြစ်သည်။ ကားအတွင်း ကုန်အမှတ်တံဆိပ်များဖြင့် ပြင်ဆင်ထားရှိခြင်းနှင့် ဒစ်ဂျစ်တယ် ကြော်ငြာများ ပြသထားခြင်းမှအစ ကားအတွင်း နမူနာပစ္စည်းများ ထားရှိခြင်းနှင့် မိမိ ကုန်ပစ္စည်းကို ရောင်းချနိုင်ခြင်းတို့အထိ မိမိတို့၏ ကြော်ငြာများကို Grab ကားအတွင်းရှိ တက်ဘလက်များတွင် ပြသထားနိုင်ပြီး ကားများကို ရွေ့လျားနိုင်သော စတိုးဆိုင်လေးတစ်ခုအဖြစ် ပြောင်းလဲကာ ခရီးသွားလာနေစဉ်အတွင်း သုံးစွဲသူများ လေ့လာစမ်းသပ်နိုင်ရန်နှင့် ထုတ်ကုန်သစ်များကို ဝယ်ယူနိုင်ရန် လုပ်ဆောင်ပေးနိုင်ပါသည်။
Grab အသုံးပြုသူခရီးသည်များသည် အဆိုပါ ဝန်ဆောင်မှုကတစ်ဆင့် အရည်အသွေးမြင့် ကုန်အမှတ်တံဆိပ်များနှင့် ထုတ်ကုန်များ၏ အထူးပရိုမိုးရှင်းအစီအစဉ်များကို သိရှိလေ့လာ နိုင်မည်ဖြစ်ပြီး စမ်းသပ်သုံးစွဲကြည့်နိုင်မည့် အခွင့်အလမ်းသစ်များ ရရှိနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။
Grab အနေနှင့် ၎င်းတို့၏ အချက်အလက် ရင်းမြစ်များ၊ ပြည်တွင်းဈေးကွက် အခြေအနေ လေ့လာချက်များနှင့် ခိုင်မာသော Online to Offline (O2O) ရပ်တည်မှုတို့ကို အသုံးချကာ ကုန်ပစ္စည်း အမှတ်တံဆိပ်များအတွက် သုံးစွဲသူနှင့် ထူးခြားဆန်းသစ်စွာ ချိတ်ဆက်ပေးနိုင် မည်ဖြစ်ပြီး လုပ်ငန်းရှင်များအနေနှင့် အခက်အခဲ တစ်စုံတစ်ရာမရှိဘဲ မိမိ ကြော်ငြာလိုသည့် သုံးစွဲသူအုပ်စုကို အလွယ်တကူ ခွဲခြားနိုင်ပြီ ဖြစ်ပါသည်။
“ဒီပရောဂျက်မှာ ကိုယ့်လုပ်ငန်းရဲ့ ရည်မှန်း Target တွေကို ပိုထိထိရောက်ရောက် လုပ်နိုင်သလို ကိုယ်ကိုယ်တိုင် အချိန်နဲ့တပြေးညီ စီမံခန့်ခွဲနိုင်တဲ့ Campaign Management Tools တွေလို အဆင့်မြင့်နည်းပညာသုံး ကြော်ငြာဝန်ဆောင်မှုတွေ ပါဝင်တာကြောင့် ကုန်အမှတ်တံဆိပ်တွေ အတွက် အထူး အကျိုးရှိစေမှာ ဖြစ်ပါတယ် ”ဟု MCI ရဲ့ Commercial Director ကိုကောင်းမြတ်လှိုင်က ပြောသည်။
ကားအတွင်း Digital display ကြော်ငြာဝန်ဆောင်မှုနနှင့်ပတ်သက်ပြီး အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက Grab Myanmar ၏ ကြော်ငြာဌာန corpsales.mm@grabtaxi.com ကတစ်ဆင့် စုံစမ်း မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
GrabAds အကြောင်း အသေးစိတ် ထပ်မံသိရှိလိုပါက https://www.grab.com/mm/business/ads/ တွင် ဝင်ရောက်လေ့လာ ကြည့်ရှု့နိုင်ပါသည်။
Grab သည် အရှေ့တောင်အာရှတွင် အများဆုံး အသုံးပြုလျက်ရှိသော ထိပ်တန်း online-to-offline (O2O) မိုဘိုင်းပလက်ဖောင်းများတွင် တစ်ခုအပါအဝင်ဖြစ်ပြီး သုံးစွဲသူများအတွက် အလိုအပ်ဆုံးသော နေ့စဉ်သုံး ဝန်ဆောင်မှုများ ပေးအပ်လျက်ရှိပါသည်။ သွားလာရေး၊ အစားအသောက်၊ အိမ်အရောက် ဈေးဝယ်ခြင်း စသည်တို့ကို e-wallet တစ်ခုတည်းဖြင့် ငွေပေးချေနိုင်သည်။ အရှေ့တောင်အာရှ နိုင်ငံသားတိုင်း ဒစ်ဂျစ်တယ် စီးပွားရေးမှ အကျိုးကျေးဇူးများ ရရှိသင့်သည် ဟု Grab က ယုံကြည်သည့်အတိုင်း ကုမ္ပဏီသည် လုံခြုံစိတ်ချရပြီး ဈေးနှုန်းသင့်တင့်သော သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၊ အစားအသောက်နှင့် ပစ္စည်း ပို့ဆောင်ရေး၊ မိုဘိုင်း ငွေချေစနစ်နှင့် ငွေကြေး ဝန်ဆောင်မှုများ ရရှိစေရန် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။ လက်ရှိတွင် Grab သည် စင်ကာပူ၊ အင်ဒိုနီးရှား၊ ဖိလစ်ပိုင်၊ မလေးရှား၊ ထိုင်း၊ ဗီယက်နမ်၊ မြန်မာနှင့် ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံများတွင် ဝန်ဆောင်မှုများ ပေးအပ်လျက်ရှိသည်။ အသေးစိတ်အချက်အလက်များ ထပ်မံသိရှိလိုပါက http://www.grab.com တွင် ဝင်ရောက်လေ့လာနိုင်ပါသည်။
MCI သည် မြန်မာနိုင်ငံသားပိုင် ကြော်ငြာလုပ်ငန်းစုတစ်ခုဖြစ်ပြီး နည်းပညာသုံး ထူးခြားဆန်းသစ်သော campaign များစွာကို ဖန်တီးပြီး ၀န်ဆောင်မှုပေးနေသော ဖန်းတီးထုတ်လုပ်ခြင်း၊ စီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့် online/offline media လုပ်ငန်းများကိုဆောင်ရွက်နေေသာ အမှတ်တံဆိပ် တစ်ခု ဖြစ်ပါသည်၊ အသေး စိတ် အချက်အလက် များကိုထပ်မံသိရှိလိုပါက http://www.mci.com.mm တွင်၀င် ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်၊
Previous articleYangon Elevated Expressway project part 1 estimated to cost $800 million
Next articleAvis Myanmar to increase investments in Myanmar by $4 million